ममता गुरूङकाे स्वरमा फेरि भेट नहाेला सार्वजनिक
राेशन घर्ती ३१ जेठ,काठमाडौं । नेपाल आईडल फेममा पोखराकि चेलि उपमा पाएकि गायिका ममता गुरुङको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ”फेरि भेट नहोला” बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा ममता गुरूङको आवाज रहेको छ भने रिकेश गुरूङको शब्द/संगीत रहेको छ । भिडियोलाई प्रतीक पराजुलीले निर्देशन गरेका छन । ममता नेपाल आईडल तेस्रो संस्करणको उत्कृष्ट ९ सम्म पुग्न सफल भएकि थिईन ।
अहिले ममता पोखरामा आफ्नै घरमा छिन् । नेपालमा कोरानाको लकडाउन भएसगैं खुलेर काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ। केही गीतहरू रेकर्ड गराएको तर लकडाउनले भिडियो निर्माण हुन नसकेको कारण सार्वजनिक नभएको ममता बताउछिन् । ” फेरि भेट नहोला” बोलको गीत गायिका एलिना चौहानले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो नि ? अब स्रोताले कसरी बुझ्ने ? जवाफमा उनी भन्छिन : लकडाउनको बिचमा कोरोना सचेतनाको गीतमा व्यस्त भए । रिकेश गुरूङसँग मेरो कुराकानी भईराख्थ्यो ।
फेरि भेट नहोला बोलको गीत सार्वजनिक भएपछि फिमेल आवाज रेकर्ड गर भन्नुभएको थियो । गीत रेकर्ड भईसकेको थियो तर बिचमा कोरोना सचेतनाका गीतमा व्यस्त भए लकडाउनमा खुलेर काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन जब मैले भिडियोको काम गर्दै थिए । एलिना जिको आवाजमा गीत सार्वजनिक भईदियो । एलिना जिको त्यस्तो राम्रो गीत बनेको थियोे मलाई डर पनि लाग्यो गीत तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने समयमा मैले रिकेश जीलाई सोधे टाईटलमा के राख्दा हुन्छ होला उहाँले Female Version राख भन्नुभयो मैले त्यसै गरेको हुँ ।
पुर्व योजना अनुसार नै काम गरेको हुँ । गीत राम्रो बनेको छ भनेर प्रतिक्रिया पाएको छु । राम्रै होला एलिना जीको गीतलाई पनि सुनिदिनुहोला भन्छु ।लकडाउनको फाईदा/बेफाइदा लकडाउनले धेरै फाईदा दिलायो । म म्युजिकमा लागेको लामो समय भएको छैन । नेपाल आईडलको यात्रामा धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ । मैले लकडाउनमा बस्दा म्युजिक सम्बन्धि नै धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गरे । धेरै म्युजिक सम्बन्धि कुराहरू सर्च गरे । बेफाइदा त त्यहि हो रेकर्ड गरेका गीत पनि भिडियो निर्माण नभएकोले सार्वजनिक भएन ।
रेडियो पनि जान पाएको छैन । त्यसो भए भोलि सम्झेर डर लाग्छ ? पक्कै पनि भोलिको दिन सम्झेर डर लाग्छ नि ? भोलिको डर नलाग्ने भए कसले पो कर्म गर्थ्यो होला हैनर…तर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ निरन्तर म्युजिकमै काम गर्नेछु । लकडाउनको समयमा मैले धेरै प्रतिक्रिया पाएको छु । जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ,सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू धेरैले म्यासेज गरेर नयाँ गीत सुन्न पाएको भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको छ । तर मैले भनिसके लकडाउनमा भिडियो निर्माण गर्न सम्भव नभएकाले गीत त सुनाउन पाएन । तर खुसी लाग्यो कति माया गर्ने स्रोता हुनुहुदो रहेछ भनेर । उहाँहरूलाई यो कोशेली पनि हो “फेरि भेट नहोला” प्रतिक्रिया पाईरहदा नेपाल आईडलको स्टेज कत्तिको सम्झनुभयो ?
एकदमै धेरै सम्झिए । सबैजनालाई सम्झिरहेको छु ।
गायीका एलिनाकाे फेरी भेट नहाेला